WAR XASAASI: Wada hadallada Korneyl Caare iyo Somaliland & Wararkii ugu dambeeyay halka ay wax marayaan | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR XASAASI: Wada hadallada Korneyl Caare iyo Somaliland & Wararkii ugu dambeeyay...
WAR XASAASI: Wada hadallada Korneyl Caare iyo Somaliland & Wararkii ugu dambeeyay halka ay wax marayaan
Kornayl Caare iyo Jabhadiisa
Hargeysa (Halqaran.com) – Odayaasha beelaha Somaliland iyo waxgaradkooda ayaa muddooyinkii dambe ka dhex-waday waan waan Jabhada Kornayl Caare iyo Xukuumada Somaliland, taasoo muddooyinkii dambe hakad galisay dagaalkii labada dhinac.
Suldaan Axmed Cismaan (Cade-gude) oo kamida Madax dhaqameedka waan waanta ka dhex waday labada dhinac ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan dhex dhexaadinta ay ka dhex wadeen xukuumada Somaliland iyo Jabhada Korneyl Caare.
Suldaan Cadde-gude ayaa sheegay in Jabhada Korneyl Caare ay isku af-garteen in xiisada kala dhaxeysa xukuumada Biixi ay wada-hadal ku dhameeyan, isla markaana ay dhinacooda ka jirin wax caqab ah oo sii hurinaysa xiisadaasi.
Sidoo kale, Suldanka waxa uu ka dhawaajiyey in xalka kama dambeysta ah ee xiisadaasi uu gacanta ugu jiro Madaxweynaha Somaliland oo hadda dalka Sacuudiga ugu maqan gudashada acmaasha Xajka.
”Markaan arintaas nuxurkeeda soo ururiyo waxba been badan iyo ku tidhi ku teen oo la sheegayaa waxba ma tarayaan balse ujeedadu waxa weeyaan in ninkaas sarkaalka ah iyo jabhadiisaba aanu ku soo dhamaysanay in arintaas si salmi ah oo isfaham iyo miiska wada hadalka lagu dhamaysto”. Ayuu yidhi Suldaan Cadde-gude.
Wuxuu kaloo yiri Suldanku, ”Arintaasna waxaan u soo gudbinaynaa oo aanu u soo anba baxnay dhinaca madaxweynaha runtiina intii aanaan Hargeysa soo gaadhin caasimada ayuu xajka u baxay, isaga ayaa la sugayaa oo laga war dhawrayaa laakiin xagaas wax ku qaydhin oo xumaan ah haba yaraatee kuma ogin”.
Ugu dambeyn, Suldaan Axmed Cismaan (Cade-gude) ayaa sheegaya, in shacabka Somaliland uu u caddeynayo in arrintaasi uu wanaag kaga keenay xagaas Sanaag, iyagana uu u geyn doono wanaaga uu u sido.
Odayaasha Beelaha Somaliland
Wada hadallada Korneyl Caare iyo Somaliland